Ndeupi mubatsiri chaiwo wekuwana capital? | Ehupfumi Zvemari
Mukushanda kwemusika wemasheya, hazvisi chete zvakakosha kuti uverenge mabhenefiti ayo mabasa anogona kuunza. Kana zvisiri, pane kudaro, zvinodikanwa kuve neese makomisheni uye mari mukutungamira nekuchengetedza. Kusvika padanho rekuti aya madhora achadzikiswa kubva pamutengo wakazara wekufamba kunoitwa mumisika yemari. Icho chiitiko chekuverenga icho iwe chaunofanirwa kuita kuratidza kuti ndeipi iyo mambure purofiti uye kwete zvakakomba zvawakawana pakupedzisira. Saka kuti nenzira iyi iwe usatore kushamisika kusingaite kana uchiita accounting yezvese zvinoitwa pamusika wekutengesa.
Nekuti, semuenzaniso, yekufungidzira mashandiro e100.000 euros, angangoita 625 euros anofanirwa kubhadharirwa akasiyana makomisheni. Naizvozvo iyo purofiti chaiyo Hazvisi izvo zvamakaona kubva pakutanga. Kana zvisiri izvo kuti iwe unowana mushure mekugadzira izvo zvaderedzwa izvi zvinoshandiswa izvo zvine mashandiro ese mune chero musika wezvemari. Kwete chete mumusika wemasheya, asi mune zvimwe zvigadzirwa zvemari, senge mari yekudyara, mari yekuchinjana-inotengeswa, zvigadzirwa uye kunyange mvumo. Hapana chimwe chazvo chakasununguka, sezvo zvine musoro kufunga.
Kune rimwe divi, iwe unofanirwa zvakare kuziva kuti kutengeswa kwemasheya hakuna kubvisa, asi mukudzoka iwe unofanirwa kuvabhadhara mune chirevo chemari. Aya ndiwo mamiriro anoratidzwa mune zvimwe zvigadzirwa zvakagadzirirwa kudyara uye zvaunofanira kutarisira kana vachinyanya kufarira kuhaya yavo mutero kurapwa. Nekuti zvirokwazvo, iyo mutero Icho chimwe chikamu icho iwe chaunofanirwa kuongorora kana uchiisa mari yako pfuma. Nekuti inogona kuve nemhedzisiro mhedzisiro iwe yaunogona kuve unonyanya kufarira kuita. Zvichienderana neprofile iwe yaunopa semudiki uye wepakati investor.
1 Mutero uye kubatsirwa chaiko
2 Mitengo yekushanda pamusika wemasheya
3 Mari inoshandiswa pamusika wemusika
4 Chaizvoizvo mihoro kubva mukushanda
5 Maitiro ekugadzirisa mashandiro?
Mutero uye kubatsirwa chaiko
Mari inowanikwa muhomwe yemari ndiyo musiyano wakanaka pakati pemutengo wekutenga nekutengesa zvikamu. Asi hazvimboratidze chokwadi pamusoro pemari inoenda kuaccount yazvino yevashambadzi vadiki nepakati sezvazviri nyaya yako wega. Kune rimwe divi, iwe unofanirwa kubvisa ese makomisheni uye manejimendi kana mari yekuchengetedza iyo yega yebasa inosanganisira. Uye kune rimwe divi, kurapwa kwemutero kweaya mafambiro. Semhedzisiro yezvose zviri zviviri mashandiro, zvichapedziswa kuti mabhenefiti havasi mambure, asi zvinopesana izvo zvakakomba sezvo nhevedzano yemari inofanirwa kudzikiswa kuti iwane pakupedzisira pamwe nerubatsiro rwechokwadi rwezviitiko zvinoitwa mumisika yemari.
Chekutanga kucheka icho vanozofanira kutarisana nacho vashandisi ndicho chakatorwa kubva mukushanda kwe kutengesa pane stock stock ChiSpanish. Ivo havangori chete kubva kune imwechete sosi yemari, asi kubva akati wandei. Uye zvakare, chikamu chakanaka chemakomisheni chinokanganisa kaviri, zvese mukutenga nekutengesa. Iyo yakanyanya kukosha ndeye iyo ine chekuita neyekupindirana mutengo. Ndeavo vanobhadhariswa nemasangano emari anoitwa mashandiro acho. Iwe unofanirwa kuvafungawo kubva zvino zvichienda mberi kuti usazotora kushamisika kusinganzwisisike pavanokuchaja kubva kunhepfenyuro yezvemari.
Mitengo yekushanda pamusika wemasheya
Iko hakuna zviyero zvakatemwa, asi zvinoenderana nemubatanidzi mumwe nemumwe anofanirwa kushambadzira mitengo yavo uye voitumira kuNational Securities Market Commission (CNMV). Ivo vanofamba pakati pe 0,20% uye 0,40% pahuwandu hunoshanda hwekuita kwega kwega. Ndokunge, kwekudyara kwe100.000 euros ichave neavhareji kuburitswa kwema300 euros uye izvo zvinofanirwa kushandiswa kaviri, panguva yekutenga nekutengesa kwemasheya. Chero zvazvingaitika, aya margins emabhizimusi anogona kuderedzwa nenzira dzevamiriri vedigital izvo pari zvino zvine zvipo zvakanakisa zvekushanda mumisika yemari.
Mari yekugadzirisa ndeimwe yemari yakatarwa inobatanidzwa mune chero chiitiko pamusika wemari. Iyo yakagadziriswa mwero inoshandiswa nevamiriri vezvemari ve0,0026% pahuwandu hwekushanda. Iine hushoma ye0,10 euros uye yakawanda huwandu hwe3,50 euros. Izvi zvinosanganisira mutengo usingakoshese asi zvichave zvinotenderwa kuita mukufamba kwese mumisika yekutengesa. Kune izvi zvinofanirwa kuwedzerwa iyo bhegi fizi ChiSpanish uye kubva kune ayo mabhanga anotarisira kuita basa iri ekunze. Iyo inoiswa nezvikwiriso, 1,10 euros yekushanda isingasviki mazana matatu euros uye yakakwira ye300 euros yemari inopfuura 13,40 euros. Chekupedzisira panewo komisheni inozivikanwa sekuchengetwa. Ndiyo yakaderera pane zvese uye huwandu hwayo huri pakati pe140.000 ne3 euros pagore anenge.
Mari inoshandiswa pamusika wemusika
Ivhareji mutengo wemugove wekutengesa (unokosha zviuru zana zvemadhora) unomiririra yekupedzisira kubhadharisa nekuda kwenzvimbo dzinotenderedza 100.000 euros Ichadzikiswa kubva pamari inowanikwa kubva mukuitwa kwakaitwa. Nekudaro, haizove iyo chete mubhadharo uyo vatengesi vachatarisana nawo sezvo mutero kurapwa kweiyi investa ichaunzawo zvakare inofanirwa mari. Kwete nekuti vanonyima, izvo zvisingaite, asi nekuti vanofanirwa kubhadharwa mu chirevo chemari. Nekuti icho chimwe chikamu chekutarisa uye icho ndechekuti iwe unofanirwa kuziva kuti mashandiro mumisika dzakasiyana dzemakambani haazove nesarudzo kunze kwekuzvizivisa kubva kune yemutero maonero. Hazvishamise kuti mhedzisiro yaro inogona kuve yakaipa kwazvo kune zvako zvaunofarira.
Mari inowanikwa, inoitika kana mutengo wekutengesa wakakwira kupfuura iyo yekutenga, inobhadhariswa mutero semari kubva mukuchengetedza mune Weyako WeMutero Mutero (IRPF). Asi kwete nguva dzose nenzira imwecheteyo kubvira mutero wemitero uri pakati pe19% ne23% uchiiswa pairi. Kubudikidza nezvikamu zvakasiyana izvo zvinozovakirwa pamari inowanikwa kubva mugore rimwe chete. Nenzira iyi, mibairo inosvika kumazana matanhatu ezviuru euros ichabhadharwa mutero, pa6.000%; pakati pe19 ne6.000 euros pa24.000% uye mune yakanyanya renji, kubva ku23 euros, ivo vanozove nemutero we24.000%. Nekudaro, pane musiyano mudiki mumutero wako uye ndiko kuti hazvingazoitika panguva yekutengesa. Asi zvinopesana, ivo vanofanirwa kubhadharwa pavanenge vachiita chirevo chemari yegore rinouya.
Chaizvoizvo mihoro kubva mukushanda
Semhedzisiro yezvose izvi zvakatemwa mutengo, iko kushanda kwakadomwa pamusoro kuchaburitsa kuburitswa kweanosvika 3.000 euros yemari inowanikwa ye10.000 euros. Nekudaro, pakupedzisira, iyo mambure purofiti kubva mukushanda kwemusika wemasheya ichave chete zviuru zvinomwe. Ndokunge, 7.000% yakaderera pane iyo mari inowanikwa mumisika yemari. Zvisinei, iwe parizvino une zvimwe nzira dzinoshanda kwazvo kurerutsa izvi zvisingadiwe mari pachikamu chako. Icho chiri pamusoro pekugadzirisa mashandiro sezvausina kumboita kare. Nekuti usakanganwa kuti zvakavanzika zviri mumusika wemasheya hazvipo, kupfuura zvaunowana mune yega yega mashandiro akaitwa.
Chimwe chinhu chausingafanire kukanganwa kuverenga inova chikamu che mihoro nemari mune yega yega yemashamba emusika mashandiro aunoita mukati megore rose. Ichakupa iwe zvishoma kana zvishoma kufungidzira mhedzisiro yekushanda. Chakaipisisa pane zvese ndechekuti iwe paunorasikirwa nemari muzvitoro zvekutengesa kana zvimwe zvigadzirwa zvemari. Nekuti mune ino chaiyo kesi sosi yemari ichave yakapetwa. Kune rimwe divi, izvo zvinogadzirwa nekushanda kwazviri uye kune rimwe divi izvo zvakagadziriswa nemakomisheni uye nemari mukutarisira nekuchengetedza kwayo. Nechikonzero ichi, hazvishamise kuti chikamu chakanaka chevashambadzi chinochengetedza iwo mafungiro ekuti kudyara nguva dzose kunosanganisira kufungidzira huwandu hwakanaka hwemari.
Maitiro ekugadzirisa mashandiro?
Nekudaro, iwe unogona kutevera akateedzana enongedzo kana matipi ekudzora aya mashandiro mumisika yequity. Ehezve, ivo havazokubhadhare iwe zvakanyanya kushanda uye pachinzvimbo mubairo unogona kuve unopa mubayiro zvakanyanya kune zvako zvaunofarira. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti iwe unenge uine mari yemazhinji maeuro. Sezvazviri muzviito zvinotevera zvatinokufumura pazasi.
Zvirinani kusarudza mashandiro enyika pachinzvimbo chekune dzimwe nyika. Izvo zvakachipa uye zvinogona kutonyanya kubatsira.
Edza kuisa muboka mabasa ako ese ekutenga nekutengesa mumwe chete. Iri izano zvekuti makomisheni haana kunyanya kukwirira. Nekufamba mune tambo iyo iri nyore kwazvo mukushandisa kwako.
Unogona kuenda ku ofertas kuti mabhanga anga achivandudza uye nemitengo yakaderera zvakanyanya. Pasina kufanira kupa chero sevhisi kana kupihwa.
Kana iwe usina chokwadi nezvekutyaira pamusika wemasheya, zano rakanakisa rinogona kunge riri usaite oparesheni. Nekuti iwe unofanirwa kuziva kuti inogona kunge iri mari isingakoshi. Uye izvo zvinogona kuwedzerwa kune kurasikirwa kwaunogona kugadzira.
Icho chiri pamusoro pekugadzirisa mashandiro sezvausina kumboita kare. Nekuti usakanganwa kuti zvakavanzika zviri mumusika wemasheya hazvipo, kupfuura zvaunowana mune yega yega mashandiro akaitwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Ndeupi mubatsiri chaiwo wekuwana capital?